Fifindran'ny covid-19 :: Nirongatra ny isan’ny marary teto an-drenivohitra • AoRaha
Fifindran’ny covid-19 Nirongatra ny isan’ny marary teto an-drenivohitra
Mirongatra be tao anatin’ny andro vitsy ny valanaretina Covid-19 teto andrenivohitra. Tafakatra dimy ambin’ny folo amby zato ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina, ny sabotsy sy alahady lasa teo. Efatra amby efapolo tamin’ireo enimpolo marary no nambaran’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, afak’omaly, no voatily teto Antananarivo. Iraika amby fitopolo tamin’ireo telo amby sivifolo kosa ny omaly. Tany Toamasina sy Fianarantsoa ary Fenoarivo Atsinanana kosa ny ambiny.
Isan’ny antony mahatonga ny fiakaran’ny antontan’isa ny tsy fanajana ny fepetra napetraka hiarovana amin’ny valanaretina. Toa efa zary goragora ny fanarahana ny fepetra ho an’ny tsirairay. Isan’ireny ireo fiara fitateram-bahoaka, izay efa mihevitra fa tsy misy intsony ny aretina ka miverina amin’ny fanaony andavanandro. Manginy fotsiny ny hatsiaka, izay tsy mitsahatra ny mamirifiry, tao anatin’ny herinandro.
Fahafatesana sy fahasitranana
“Tsara ihany ny mitandrina ny rehetra mba hahafahantsika mivoaka amin’izao valanaretina izao”, hoy ny profesora tsy mitsahatra ny manentana ny rehetra isaky ny mandray fitenenana.
Ny filazana ny fisian’ny vehivavy iray matin’ny Covid-19 tany Analakininina, Toamasina, no nanombohan’ny mpitondra tenin’ny ivon-toeram-pibaikoana ny ady amin’ny valanaretina (CCO) ny tatitra nataony. Voalazany fa »manana tosi-drà ambony sady voan’ny aretina diabeta ity vehivavy 54 taona nindaosin’ ny fahafatesana, omaly, ity”. 14 hatreto ireo olona namoy ny ainy vokatry ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara hatramin’izao.
Na izany aza anefa dia nanome tsirim-panantenana ho azy ny hamaroan’ireo sitrana tao anatin’ny roa andro. Miisa dimy amby dimampolo sy eninjato (655) izy ireo, hatramin’ny omaly, raha mbola valo amby roapolo sy sivinjato (928) amin’ireo enina amby sivifolo sy dimanjato sy arivo (1596) voamarina fa mitondra ny tsimok’aretin’ny Covid-19 ny olona manaraka ny fitsaboana eny amin’ny tobimpahasalamana. Ny sabotsy lasa teo no nahitana trangana fahasitranana betsaka indrindra hatramin’ny 19 marsa nisian’ny valanaretina teto amintsika. Nahatratra roapolo amby zato (120) izy ireo ka tany Toamasina ny ankamaroany (108). Tany Moramanga (7), Befelatanana (3), Bongolava (1) ary Andohatapenaka (1) ny ambiny. Niampy fito amby telopolo (37) kosa izany, araka ny tatitra nomen’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, omaly.
Nitombo roa kosa anefa ny isan’ireo tranga mampiahiahy, ny faran’ny herinandro teo. Tafakatra sivy indray izany, omaly.
Fahitana razana teny ankatso :: Miaramila sy tovovavy niara-maty teo ambony fandriana
Fiparitahan’ny valanaretina :: Mihoatra ny arivo ireo mararin’ny Covid-19 an-dalam-pitsaboana